RAVELOSON CONSTANT : TSY ANDRO FITSERANA, FITOMANIANA RAHAMPITSO 17 MARTSA FA EFA MANDRESY ISIKA – MyDago.com aime Madagascar
Efa taona taorian’ny zavanitranga teny amin’ny episkopa hoy ny Ct Raveloson Constant androany teny amin’ny Magro Behoririka, ny datin’ny 17 Martsa rahampitso. Misy ny hatezerana ho an’ny sasany , misy ny alahelo ary tsaroako hoy izy fa nisy olona nandraiky narary mafy tokoa, misy ny tena mahatsiaro tanteraka fa zava-dehibe tsy azo n’inon’inona soloana eto an-tany izany hoe manana filohampirenena ara-dalàna, izany hoe misy hiram-pirenena, izany hoe misy fahalalahana sy fahafahana. N’inon’inona hoy izy alahelo dia rahampitso dia andro famokonana totohondry satria tsy misy teto amin’ity tany ity izany filoham-pirenena voafidim-bahoaka nangataka famelana rehefa nahatsapa fa nisy vahoaka tezitra taminy, na vahoaka voafitaka io, na vahoaka nentim-po io ka voatariky ny sasany tany amin’ny tsy izy. Tsy mbola nisy teto amin’ity firenena ity filoham-pirenena ka nahalala fa hoe raha hahasoa ny firenena dia aleo atolotra ny hafa ny fitondrana ahazoany mikarakara ny fifandimbiasam-pitondrana ao anatin’ny demokrasia. Tsy mbola nisy teto amin’ity tany ity raha mbola jiolahimbotom-politika, rangory fototry ny afo, nitondra atambo tahaka izay efa-taona izay. Ny tanan-dRajoelina no nasainy nanoratra izao atambo izao. Ny miaramilan-dRajoelina no napetraka ankeriny amin’izao atambo izao. Mbola hitako taratra amintsika hoy Constant, eny ny lakrimozena, ny atambo nentin-dRajoelina, eny na dia ny « bois de rose » aza. Isika olona androany ireto hoy izy dia olona afaka. Fitenintsika foana ny hoe « contre pepo » satria nopepoina isika tamin’ireny, fa amin’izao isika mitenyizao dia Rajoelina no mitady fomba rehetra hangalarana fifidianana, satria efa ataon’ny olona raoka aliaka, efa taona aty aoriana. Na i Goldblatt aza dia miray tsikombakomba aminy. Mandram-piverin’ny filoha Ravalomanana Marc eto dia Ravalomanana daholo isika rehetra eto. Rehefa mbola isika hoy izy no manao hoe tsy misy fifidianana dia tsy misy izany. Rehefa tena tonga eto ilay tena izy ka miteny hoe ataovy dia ataontsika. Tsy andro fitserana, fitomaniana rahampitso fa efa mandresy isika.
Auteur Solo Razafy*Publié le 16 mars 2013 Catégories Politique
4 pensées sur “RAVELOSON CONSTANT : TSY ANDRO FITSERANA, FITOMANIANA RAHAMPITSO 17 MARTSA FA EFA MANDRESY ISIKA”
Io fiarahana mazava sy malalaka nisy teo amin’ny Malagasy ny ny Filoha-pirenena izay mariky ny safidy marina nasehon’ny Vahoaka : nitady toko ny Malagasy ka sendra vato..
-dia ny fanongam-panjakana ve sisa no fomba nentina nakana ny fitondrana izay tsy nomen’ny Malagasy azy ireo tamin’ny fifidiana nalalaka sy nisokatra ho an’ny rehetra?
17 mars 2013 à 1 h 02 min
17 mars 2013 à 3 h 16 min
Tsara tokoa ny tsy manadino fa nisy fanoganam-panjakana teto Madagasikara ny 17 martsa 2009. Baiko avy any Frantsa no niaviany ary i Andry Nirina Rajoelina no nasaina nanao izany. ity farany kosa no naniraka ny CAPSAT hanao ny fanafihana.
Meloka eo anatrahan’ny lanitra sy ny tany i Rajoelina ka aoka isika rehetra samy hitsara izany @ izay mety azontsika atao.
Fototry ny fijalian’ny Malagasy mihitsy iny fanoganam-paanjakana iny. ILay mpianatra maty tany Chine ohatra dia tena porofo mivaingana fa tsy manam-bola hanomezana ny vatsim-pianarana ny FAT fa manam-bola hanaovana fety sy hamenoana paosy . Tsy maintsy ho valiana izao rehetra izao na ho ela na ho haingana.
Tsy ireo nahavita iny heloka iny mivantana ihany no meloka eto @ firenena fa izay rehetra manaiky izao toe -javatra iainana eto amin’ny firenena izao ka ho lovain’ny zanaka amam-para any aoriana. Koa mbola tsy tara ry havako isany fa mijoroa vonjeo ny sehatra rehetra ahafahanao maneho ny tsy fankasitrahanao izao fiainana jiolahim-boto itondrana ny firenena izao. Aoka ho fantantsika fa raha nampiroborobo ny asam-piangonana ny Filoha Ravalomanana ( atoko fa samy nahazo tombony t@ izany daholo ireo karaza-pinoana misy)dia fantatra fa ankoatra ny fampianarana any an-tsekoly dia ny fiangonana no rafi-pitaizana tsara fototra eto Madagasikara; indrindra fa any amanivolo lavitra manana olona maro tsy mahay mamakiteny sy manoratra fa ny fitoriana ny vaovao tsara isaky ny alahady no mitaiza sy manabe. Saingy indrisy izao notapahana fotsiny izao. Koa asakasak’isika maniry zanaka amam-para ho vanona no manaiky izao zavatra iainana eto amin’ity firenena ity. Tohizo foana ny fanentanana Atoa Raveloson Constant fa mila tairina ny valalabemandry!
Précédent Article précédent : VOHIBATO, ALAKAMISY ITENINA : « tsy ho voavidy vola izany ny fitiavako ny tanindrazako » hoy NY FILOHA RAVALOMANANA
Suivant Article suivant : les GTT à la Bastille